Ahoana no ahafahan'ny lehilahy manintona vehivavy | Bezzia
Maria Jose Roldan | 01/06/2021 22:00 | fifandraisana
Ny lehilahy manintona dia tsy voatery ho tsara tarehy, fa mety manana toetra hafa mahaliana azy eo amin'ny sehatry ny vehivavy. Ity sokajin-dehilahy ity dia mahay mampiasa ny toetrany sasany rehefa afaka mandresy vehivavy sasany. Ny haavon'ny fisarihana dia lehibe ka tsy manana olana be loatra izy ireo rehefa miresaka vehivavy maro.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia holazainay aminao hoe inona ireo fitaovam-piadiana izay ananan'ny lehilahy tsy dia tsara tarehy loatra, fa raha tena manintona ny ankamaroan'ny vehivavy.
2 Mahaiza mandanjalanja
3 Fihetsika gestural
Ny fomba fiasan'ny lehilahy dia tena zava-dehibe tokoa raha ny mahasarika vehivavy iray. Ny fihetsika hentitra sy azo antoka dia mahatonga ny lehilahy hahatsapa fahatokisana lehibe amin'ny olony raha toa ka afaka mametraka fifandraisana amin'ny vehivavy iray izy. Ny fananana fanatrehana lehibe ankoatry ny fandefasana fiarovana be dia be, mahatonga ny haavon'ny fisarihana hiakatra integer maro, na eo aza ny zava-misy fa ilay lehilahy resahina dia tsy ao anatin'ny fenitry ilay heverina ho lehilahy tsara tarehy.
Lafiny iray hafa manandanja mikasika ny herin'ny fisarihana lehilahy maro amin'ny vehivavy, Izy io dia misy ny fifandraisana manokana amin'ny fifandraisana resahina. Mila manana fepetra sy fahamalinana manokana ianao rehefa miresaka amin'ny vehivavy ary ny fanaovana izany amin'ny fahaiza-mandanjalanja lehibe dia zavatra iray tadiavin'ny sehatra vehivavy.
Ny fomba fiasa ara-batana dia singa iray hafa mety hahatonga ny vehivavy hianjera amin'ny tongotry ny lehilahy iray. Tsy maintsy atao am-pahendrena lehibe izany mba hahatsapan'ny vehivavy tsara sy mahazo aina amin'ny fisian'ny lehilahy. Fikarohana samihafa no nametraka izany ny faritry ny kiho sy ny sandry dia tonga lafatra raha ny amin'ny fametrahana fifandraisana iray amin'ny fifandraisana iray.
Ny gestures dia iray amin'ireo lafiny mazava indrindra raha ny amin'ny fanavahana olona manintona iray amin'ny iray hafa izay tsy. Misy fihetsika sasany izay mety hampita ny tsy fahampian'ny filaminana sy fahatokisan-tena, toy ny fiampitana ny sandrinao eo afovoan'ny resaka amin'ny vehivavy. Raha lehilahy manintona sy matoky tena, mazàna mijery ny mason'ny olona iray hafa nefa tsy manalavitra ny fijerena na ahoana na ahoana. Ankoatry ny fijery izay zava-dehibe foana, ny fahalalana ny fihomehezana dia manampy amin'ny fametrahana fifandraisana iray. Tokony hahay hitsiky amin'ny fotoana mety ianao. Ity dia zavatra tian'ny vehivavy be dia be, mitarika fiakarana somary manan-danja.
Raha fintinina, ny hatsaran-tarehy dia tsy ampy raha hisarika vehivavy iray. Misy toetra hafa afaka manintona ny lehilahy amin'ny lafiny rehetra. Ny fananana fiterahana sy fanatrehana iray, ary koa ny fananana fahaiza-mandanjalanja tsara rehefa mitsabo vehivavy sy misoroka ny fihetsika sasany dia singa iray izay mahasarika ny lehilahy indrindra amin'ny vehivavy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Ahoana no ahafahan'ny lehilahy manintona vehivavy